tijaabinta adduunka cunista
Ugu Weyn Ee Kacsan Tijaabinta DevOps World
DevOps waa isku darka waxqabadka Horumarinta iyo Hawlgallada ee horumarinta softiweerka iyo gaarsiinta.
Tijaabiyeyaasha ku lug leh qaabka gaarsiinta DevOps waxay bilaabayaan inay weydiiyaan su'aalo sida:
Halkee ayuu imtixaanku kaga habboon yahay qaabka DevOps?
Sidee tijaabinta iyo QA-ga DevOps uga duwan yihiin tijaabooyinka lagu daydo Agile iyo biyo-dhaca?
QA ahaan, maxay yihiin xirfadaha dheeraadka ah ee la iga filayaa inaan ogaado?
Mashruucan wuxuu ka hadlayaa qalabka, istaraatiijiyadaha, iyo dhaqamada aan ubaahanahay inaan hirgalino si wax ku ool ah loogu tijaabiyo aduunka DevOps, isku duubida otomaatiga iyo tijaabada joogtada ah ee DevOps.
QA iyo Tijaabinta DevOps
Sidee tijaabintu uga soo rogmatay biyo-dhaca una rogtay DevOps?
Tijaabinta iyo Hubinta Tayada waxay arkeen isbedel fara badan oo laga soo bilaabo maalmihii biyo dhaca, Agile iyo hadda DevOps. Moodalka biyo-dhaca, tijaabinta waxaa loo arkay inay tahay weji ka mid ah wareegga nolosha ee horumarinta barnaamijka. Imtixaan qaadayaasha iyo dadaalka tijaabada ayaa si aad ah loo sifeeyay halka tijaabiyeyaashu ka mid ahaan jireen kooxda imtixaanka oo inta badan ka sooca kooxda horumarinta.
Tijaarayaasha ayaa lahaa istaraatijiyad tijaabin waxaana loo arkay inay yihiin iridjoogayaal tayo leh. Tijaabadu inta badan waxay ahayd mid gacmeed waxaana loo isticmaali jiray inay dhacdo kadib markii softiweerka si buuxda loo soo saaray wax yar uunna loo sii daayo wax soo saarka.
Sidoo kale, softiweerka waxaa loo isticmaali jiray waqti dheer in la bixiyo. Koox hawlgallo gaar ah ayaa mas'uul ka ahaa in lagu sii daayo softiweerka wax soo saar kaas oo, sida ugu fiican, u dhaca dhawrkii biloodba mar. Ma jirin ama heer hoose oo isgaarsiineed / wadashaqeyn oo udhaxeysa kooxda Ops iyo kooxda Dev.
Qaabka Agile wuxuu abuuray isbeddel ku yimaada horumarka iyo booska imtixaanka iyo sidoo kale sii deynta soo noqnoqoshada. Barnaamijka softiweerka waxaa loo sameeyay si isdaba-joog ah iyo kordhin Scrum, taas oo ah habka loo yaqaan 'Agile delivery model', si dhakhso leh ayuu caan ugu noqday.
Dadaalka horumarka ayaa loo kala jaray taxane gaagaaban oo gaagaaban, oo caadi ahaan soconaya toddobaadyo 2-4. Soocelin kastaa waxay abuureysaa barnaamij suurtagal ah oo lasocon karo iyadoo lagu darayo waxyaabo cusub ama xoojinaya astaamaha jira.
Tijaabiyeyaashu waxay ka mid noqdeen kooxda horumarinta imtixaankuna wuxuu noqday waxqabad barbar socda oo lagu horumarinayo softiweerka, halkii laga noqon lahaa wajiga dhamaadka SDLC. Hawsha imtixaanku waxay noqotay mas'uuliyad la wadaago oo tayada ay lahaayeen kooxda horumarinta.
Qaabka Agile wuxuu isku dhafay horumarka iyo tijaabooyinka tijaabada wuxuuna wadada u xaaray in si deg deg ah loo gaarsiiyo softiweerka, si kastaba ha noqotee, geynta dhabta ah ee wax soo saarka waxaa wali sameeyay koox gaar ah oo TechOps ah.
In kasta oo kooxda TechOps ay aqoon u leeyihiin server-yada, shabakadaha, iyo dejinta, haddana waxay caadi ahaan iska iloobeen faahfaahinta sii deyn kasta. Jawaab celinta kooxda horumarka ayaa gaabis ahayd. Haddii cilad ay ku jirtay sii deynta, waxay caadi ahaan qaadan doontaa saacado yar in kooxda horumarinta ay ku baraarugto arrinta.
DevOps waxay u qaadeysaa qaabka 'Agile' tallaabo dheeraad ah iyadoo la soo dhoweynayo howlaha sii deynta iyo dejinta kuwa horumarka iyo imtixaanka. Tani waxay ka dhigan tahay in koox dhaq-dhaqaaqa kaligeed ay mas'uul ka tahay horumarinta, tijaabinta iyo sii deynta barnaamijka ay abuureen.
Istaraatiijiyadda Tijaabada DevOps
Tijaabinta DevOps waxay ku fidsan tahay dhammaan horumarinta barnaamijka iyo wareejinta nolosha. Tijaabiyeyaashu hadda uun diiradda kama saarayaan imtixaanka shaqada iyo xaqiijinta muuqaalka.
Tijaabiye ahaan, waa inaan sidoo kale kaqeyb qaadano tijaabinta howlaha, tijaabinta waxqabadka, baaritaanka amniga aasaasiga ah, iyo sidoo kale inaan awoodno inaan kormeerno oo aan falanqeyno xogta wax soo saarka iyo diiwaanada.
Dan Ashby wuxuu leeyahay post fiican ku saabsan tijaabada DevOps ee uu ku sharaxayo
Waad arki kartaa sababta ay dadku ugu halgamayaan inay fahmaan meesha imtixaanku ku habboon yahay qaab aan haba yaraatee xusin. Aniga ahaan, imtixaanku wuxuu ku habboon yahay dhibic kasta iyo hal dhibic oo moodeelkan ah.
Xaqiiqdii, imtixaanku wuu dhici karaa waana inuu ku dhacaa heer kasta oo ah qaabka 'DevOps'. Gudaha Istaraatijiyadda Agile Test Strategy , waxaan ku sharaxnay sida imtixaanku ugu habboon yahay qaabka 'Agile'.
Istaraatiijiyadda tijaabada DevOps way sii dheereyn kartaa taas iyadoo lagu daro qaybaha soo socda:
Tijaabinta otomaatiga iyo Tijaabinta joogtada ah ee DevOps
Xulashada aaladaha iyo teknoolojiyada waxay waligood muhiim ugu noqdeen nooca DevOps. Xulashada qalabku waxay u oggolaaneysaa awoodda hay'ad inay ku gaarsiiso codsiyada iyo adeegyada xawaare sare.
Waxaa jira xooga saarida tijaabada otomaatiga ah ee DevOps maadaama aan dooneyno inaan abuurno dhaqan aan ku riixno koodhadhyada si deg deg ah oo kalsooni leh.
Sidoo kale imtixaannada otomaatiga ah ee otomatiga ah, waa inaan sidoo kale yeelannaa noocyo tijaabo ah oo waxqabad ah iyo sidoo kale tijaabooyin amniga / adkeysi u leh dhuumaha geynta.
Looma baahna in la sheego, ka hor inta aan la fulin mid ka mid ah tijaabooyinka otomaatiga ah ee kor ku xusan, ugu horrayn uguna muhiimsan waa in la dhiso dhuumaha otomaatiga ah ee dhuumaalaysiga iyo gaarsiinta aaladda Isdhexgalka joogtada ah, sida Jenkins.
Tijaabinta wax soo saarka
Tijaabinta wax soo saar micnaheedu maahan inaad fulineyso qoraalladaada waxqabadka / waxqabadka waxqabadka ee ka soo horjeeda nidaamka tooska ah ee isticmaalayaashu isticmaalayaan dalabka.
Waxaan ku bilaabi karnaa inaan falanqeyno isbeddellada A / B ama imtixaannada kala duwan. Waxaan sidoo kale la socon karnaa server-yada wixii dhaqan ah oo qariib ah, sida xusuusta daadata, isticmaalka CPU-ga oo sareeya, iwm.
Saamaynta DevOps ee Imtixaanka
Sidee kuwan oo dhami u beddeleen doorka tijaabiyayaasha iyo tijaabinta DevOps?
Imtixaan qaadayaashu hadda waxaa laga filayaa inay yeeshaan ugu yaraan aqoonta soo socota iyo xirfadaha si ay si hufan ugu fuliyaan howlaha waxqabadka
Aqoonta xiriirinta aasaasiga ah
Qoraalka aasaasiga ah ee 'Unix / Shell', tusaale ahaan. bash, Python
Isdhexgalka joogtada ah / Gaarsiinta joogtada ah tusaale. Jenkins,
Qalabka baaritaanka waxqabadka sida JMeter ama Gatling
Diyaar u ah Hawlgallada iyo Tijaabinta adkeysiga
Aqoonta weelasha, Docker, Kubernetes
Weydiinta qalabka kormeerka sida Splunk
Adeegyada daruuraha, tusaale ahaan. AWS, Azure
sida loo bilaabo baaritaanka otomaatiga ee laga soo bilaabo xoqida
node js hello tusaale adduun
Xaashida Khiyaamada Qalabka Imtixaanka Karate API
Amarka Git wuxuu Tijaabiyaha Kasta Yahay inuu Ogaado
Ma jiraan Kooxda QA ee Agile
Sida Loogu Wareejiyo Faylasha Linux oo wata SCP iyo Rsync
Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Imtixaanka Lagu Wado